Fetim-bokatra Alahady 05 Jolay 2009 – FJKM Ambavahadimitafo Fetim-bokatra Alahady 05 Jolay 2009 |
Fetim-bokatra Alahady 05 Jolay 2009
Publié le 01 juillet 2009 à 12:07
Amin’ny Alahady 05 Jolay izao no hanatanterahina ny fetim-bokatra eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo.
Asaina ny kristiana rehetra eto amin’ny fiangonana, entanina ho tonga maro, entanina ihany koa ny zanakampielezana.
Ny fotoana dia hanomboka amin’ny 9 ora toy ny mahazatra.
Ny fandraisana ny vokatra sy ny valopy havadika ho vola kosa dia hanomboka amin’ny 7 ora sy sasany.
Aorian’izany dia hisy ny sakafom-pifaliana hiarahana ao amin’ny Akany Ralibera Daniel.
Mbola misy vitsivitsy ny tapakila amin’ny sakafo koa afaka manantona ao amin’ny trano fisainana isika maka izany.